Apr 21, 20193min read Science Fiction
ပထမဆုံး ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ Christopher Nolan ရဲ့ဇာတ်ကားသစ် Interstellar ဟာ Perfect ဖြစ်တဲ့ ရုပ်ရှင်လားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ရုပ်ရှင်လောကမှာ ကွယ်ပျောက်လုနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ Cinematic Experience ဆိုတဲ့ အရာကို ပြန်လည်အသက်သွင်းပေးထားပြီး ရုပ်ရှင်လောကအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားပါပဲ။
လူသားတွေသည် ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ စတင် မွေးဖွားရှင်သန်ခဲ့ကြသည်။ သို့ပေမဲ့ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ သေဆုံးသွားကြဖို့မှ မဟုတ်တာပဲ။
မဝေးတဲ့ အနာဂတ်ခေတ်တစ်ခေတ်မှာ လူသားတွေရှင်သန်နေထိုင်ရာ ကမ္ဘာကြီးသည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေနှင့် များပြားလာသော လူဦးရေတွေအတွက် ထိန်းသိမ်းနိုင်သော Capacities တွေလျော့ပါးလာမှူတွေကြောင့် အရင်းအမြစ်တွေနည်းပါးလာကာ လူသားတွေနေထိုင်နိုင်မှုကို Sustain မလုပ်နိုင်တော့တဲ့ အနေကို ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ ထိုအကျိုးဆက်တွေကတော့ Food Sources လို့ခေါ်တဲ့ အစားအစာအရင်းအမြစ်တွေ ရှားပါးလာပြီး Agricultural Crisis လို့အမည်ရတဲ့ စိုက်ပျိုးရေးတွေလည်း အထမမြောက်တော့တဲ့ အပြင် နေ့စဉ်ရက်ဆက် သဲမုန်တိုင်းတွေ တိုက်ခတ်လာပါတော့တယ်။ ထို့အတွက်ကြောင့် အိမ်တွေမှာ စားပွဲပေါ်က ပန်းကန်တွေကို အမြဲလိုလို မှောက်ပြီး သိမ်းထားကြရပါတယ်။ ထိုခေတ်မှာ Engineers တွေ Doctors တွေ Social Media တွေ Entertainment တွေ မလိုအပ်တော့ပါဘူး။ Food Resources တွေနဲ့စိုက်ပျိုးရေးသမားတွေပဲ လိုအပ်ပါတော့တယ်။
Cooper ဆိုတဲ့သူက အရင်က NASA က Pilot ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ပြောင်းခင်း စိုက်ပျိုးရေးသမားတစ်ယေက် ဘဝသို့ပြောင်းကာ သားသမီး နှစ်ယောက်နှင့် ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သော ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ဖခင်နဲ့အတူနေထိုင်တဲ့ သာမာန်လူသားတစ်ယောက်ပါ။ သမီးဖြစ်သူ Murph ရဲ့ကျောင်းဆရာမက အာကသပိုင်းဆိုင်ရာ Text book ကို Version အသစ်ဖြစ်တဲ့ လကမ္ဘာပေါ်ကိုသွားခြင်းသည် ထို ခေတ်အချိန်က Soviet ကို ယှဉ်ပြိုင်မှူအတွက် လိမ်လည်ခဲ့ဲတဲ့ Conspiracy ဇာတ်လမ်းအတုကြီးလို့ ပြောဆိုခြင်းကို နည်းနည်းလေးမှ လက်မခံတဲ့ သူတစ်ယောက်။ ပြီးတော့ သူနဲ့သူ့သမီးဖြစ်သူ Murph နှင့် ဖခင်နှ်င့် သမီးကြား နွေးထွေးတဲ့ မေတ္တာသံယောဇဉ် ကြီးသူတစ်ယောက်။
Murph ရဲ့အခန်းတွင် တစ်ခါတစ်ရံ စာအုပ်တစ်ချို့သည် သူ့အလိုလို ပြုတ်ကျတတ်သောကြောင့် Murph က သူတို့အိမ်ကြီးသည် သရဲခြောက်သော အိမ်ကြီးဟုပြောသည်။ ထို့အပြင် ထို တစ္ဆေဆန်ဆန် ပုဂ္ဂိုလ်သည် Murph ကို Coded Messages တွေပေးပေးနေသောကြောင့် Cooper သည်ထို တစ္ဆေဆန်ဆန် ပုဂ္ဂိုလ်သည် အသိညာဉ်ရှိ၍ အမျိုးအမည်မသိသော ပုံသဏ္ဍန်တစ်ခုခုဖြစ်သည်ဟု ကောက်ချက်ချလိုက်သည်။ ထို့အပြင် ထိုအရာသည် သဲတွေကနေတဆင့် Morse Code ဖြင့် Coordinates တစ်ခုကို ပြသခဲ့ရာ Cooper တို့သားအဖနှစ်ယောက် ထိုနေရာကို ညတွင်းခြင်း သွားခဲ့ကြရာ ထိုနေရာ အရောက်တွင် ထိုနေရာသည် Professor Brand ဦးဆောင်တဲ့ Secret NASA Facility ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေသည်ကို သိခဲ့ကြရသည်။
ကျွန်တော်တို့Solar System ထဲက Saturn ဂြိုလ်နားမှာ Wormhole တစ်ခု ထူးဆန်းဖွယ် ဖြစ်တည်နေသည်ကို Professor Brand က Cooper ကိုပြောပြသည်။ ထို Wormhole သည် လူသားတွေရဲ့ဆက်လက်ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှုဆိုတဲ့ ကံကြမာကို အလောင်းအစား ပြုလုုပ်ရမဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်တို့က လာထားသွားပေးသော အရာပင်ဖြစ်သည်။ (ရှင်ရှင်ထဲတွင် ဇာတ်ကောင်များသည် "They" လို့တင်စားပြောဆိုခဲ့သောကြောင့် ကျွန်တော်က တစ်စုံတစ်ယောက်ဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။) ထို Wormhole မှ တစ်ဆင့်ဖြတ်၍ တစ်ခြား Galaxy ကိုသွားရောက်ကာ လူသားတွေ ဆက်လက်ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မည့် Habitat Planets များကို ရှာရန်ပင်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် Professor Brand က Cooper ကို ယခုထွက်မည့် Mission အသစ်အတွက် အာကာသယာဉ်ဖြစ်သော Endurance ကို မောင်းနှင်ရန် တောင်းဆိုလေသည်။ သူတို့သွားရမဲ့ Mission သည် အရင်က လူသားတွေ သွားခဲ့ကြသော Lazarus Mission နောက်ကို လိုက်ရန်ပင်ဖြစ်သည်။ Lazarus Mission ဆိုတာက NASA ကနေ လူသားတွေကို Wormhole ကနေဖြတ်ပြီး တစ်ခြား Galaxies တွေမှ ဂြိုလ်တွေရဲ့ရေရှည် Sustainability ကိုရယူရန် လွှတ်ထားသော Mission ပင်ဖြစ်သည်။
Professor Brand ရဲ့အဆိုပြုချက်ကို Cooper ရဲ့လက်ခံလိုက်မှုက Cooper နဲ့သူ့ရဲ့သမီးဖြစ်သူ Murph ဖြစ်သူတို့ကြားက ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုကို တံတိုင်းတစ်ခုသဖွယ် ခြားနားသွားစေခဲ့လေသည်။ ဖခင်ဖြစ်သူကို ထာဝရခွဲရတော့မယ်ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ အတူ 10 နှစ်သမီးဖြစ်သူ Murph သည် ဝမ်းနည်းမှုတွေကို ထွေးပိုက်ကာ ဖခင်ကို သူမအား မထားသွားရန် ငိုယိုပြီးတောင်းပန်ပြောဆိုသော အခန်းသည် ကျွန်တော့ရဲ့နှလုံးသားကို ကိုင်ဆောင့်လိုက်သလို ခံစားမှုကြောင့် အလွန်ပင် ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါသည်။ ထိုနေ့က ပြုတ်ကျတဲ့ စာအုပ်တွေကို Message ပြန်ဖတ်တော့ "Stay" လို့ပြောဆိုနေတာကို Murph က Cooper ကိုမျက်ရည်စက်လက်နှင့် ပြောဆိုပြီး သူမတို့ကို မခွဲသွားရန် တောင်းပန်ပြောဆိုလေသည်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့သားအဖနှစ်ယောက်ရဲ့ခွဲခွာမှုသည် မလှပချေပေ။
Cooper တစ်ယောက် Professor Brand ရဲ့သမီးဖြစ်သူ Amelia နှင့် Physicist ဖြစ်သူ Romilly ဆိုသူနှင့် Geographer ဖြစ်သူ Doyle ဆိုသူတို့နှင့် အတူ လေးထောင့်သဏ္ဍန် Multi-Purpose Robots တွေဖြစ်တဲ့ CASE နဲ့ TARS တို့နဲ့အတူ Wormhole မရောက်ခင်2နှစ်ခန့်သွားကြရပြီး Wormhole ထဲကို ဝင်ကာ တစ်ခြား Galaxy ကိုခရီးထွက်ခွာလေတော့သည်။ သူတို့ Wormhole ထဲကို ဖြတ်သန်းသွားခဲ့စဉ် အချိန်အခါက Amelia ရဲ့လက်ကို extra-dimensional ဖြစ်တည်မှု တစ်ခုက လက်ဆွဲခဲ့သည်ကို တွေ့ကြုံခဲ့ကြရလေသည်။ သူတို့တွေ တစ်ခြား Galaxy ကိုရောက်ရှိသောအခါ သွားရောက်ရန် ရွေးချယ်စရာ ဂြိုလ်3ခုရှိလေသည်။ ထိုဂြိုလ်တွေကတော့ ထိုဂြိူလ်တွေပေါ်ကို အရင်ရောက်ရှိနေပြီး Sustainability Data, Magnetic Fields Data, Atmosphere Data, Landscaping Data, Temperature Data, Gravitational Data တွေကို စုဆောင်းနေသော လူတွေရဲ့အမည်အရ Miller, Mann နှင့် Edmunds ဆိုသော ဂြိုလ်တွေပင် ဖြစ်သည်။ သူတို့ ဘယ် ဂြိုလ်ကို အရင်သွားခဲ့ကြလဲဆိုတော့..... ထို့အပြင် သူတို့မသိသေးတဲ့ သူတို့Mission ရဲ့ နောက်ကွယ်က အဖြစ်မှန်က ဘာလဲ?
ယနေ့ခေတ် ရုပ်ရှင်လောကရဲ့မှော်ဆရာတစ်ဦးသဖွယ် တင်စားခေါ်ဆိုနိုင်လောက်တဲ့ Director Christopher Nolan က သူ့ရဲ့ညီဖြစ်သူ Jonathan Nolan ရေးသားခဲ့တဲ့ ဇာတ်ညွှန်းကို သူပါ ဝင်ရောက်ရေးသားခဲ့ပြီး ယခု ဒီ Interstellar ဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်တွေအနေနဲ့ကတော့ Matthew McConaughey က Cooper အဖြစ်၊ Anne Hathaway က Amelia Brand အဖြစ်၊ David Gyasi နဲ့Wes Bentley တို့က Romilly နဲ့ Doyle တို့အဖြစ်၊ ပင်တိုင်စံ Michael Caine ကြီးကတော့ Professor Brand အဖြစ်အပြင် Jessica Chastain နဲ့Casey Affleck တို့က Cooper ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့ Murph နဲ့ Tom တို့ ရဲ့လူကြီးဘဝတွေနေရာမှာ သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ်။ ထို့အပြင် ဒီဇာတ်ကားမှာ Mystery Role တစ်ခုပါဝင်ပြီး ထို role ကို နာမည်ကြီးမင်းသားတစ်ယောက်က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်။ သူက ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုတော့ Mystery Role ဆိုတဲ့ အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော် မပြောပြတော့ပါဘုူး။
Christopher Nolan ကို James Bond ဇာတ်ကားတစ်ကားကို ရိုက်မယ်လို့နာမည်ထွက်ဖူးခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်မှာ Christopher Nolan တစ်ယောက် Inception ကိုရိုက်ကူးသွားပါတယ်။ ထို့နောက် သူ့ကို Star Wars Episode VII ကို ရိုက်ကူးမဲ့ စာရင်းထဲမှာ ပါလာတဲ့အခါမှာတော့ သူဟာ ယခု Interstellar ကိုရိုက်ကူးသွားခဲ့ပါတယ်။ Interstellar ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ 8 နှစ်ခန့်က Kip Thorne ဆိုတဲ့ Theoretical Physicist တစ်ယောက်က သူ့ရဲ့"Warped Space- Time" Theory ကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရန် Paramount ကိုချဉ်းကပ်တော့ Paramount က Steven Spielberg ကိုရိုက်ကူးရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ထိုအခါ Steven Spielberg ကလည်း Jonathan Nolan ကို ဇာတ်ညွှန်းရေးသားရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီးနောက် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ထို Project မှ ထွက်ခွာသွားသောအခါ Jonathan Nolan က သူ့ရဲ့အစ်ကို ဖြစ်သူ Christopher Nolan ကို ဒီကားရိုက်ကူးရန် Paramount ကိုအကြံပေးခဲ့သည်။ Paramount က လက်ခံခဲ့သောလည်း များပြားလှသော ကုန်ကျငွေတွေကြောင့် Christopher Nolan ရဲ့ပင်မတပ်စွဲရာ Company ဖြစ်တဲ့ Warner Bros. နဲ့ပူးပေါင်းပြီးထုတ်လုပ်ပေးခဲ့ကြရပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားရဲ့အကျိးအမြတ်ကတော့ နောက်ရိုက်မဲ့ Friday the 13th ဇာတ်ကားနဲ့South Park Movie တို့ကို ထို Companies နှစ်ခု ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ကြမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့Personal Project ဖြစ်တဲ့ ဒီဇာတ်ကားဟာ Christopher Nolan ရဲ့သမိုင်းမှာ Chapter အသစ်တစ်ခု တပ်ပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ဇာတ်လမ်းကြာမြင့်ချိန် 169 minutes ဆိုတာ သူရိုက်ဖူးသမျှရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ အကြာမြင့်ဆုံး ဇာတ်ကားတစ်ကားပါပဲ။ ပြီးတော့ ဒီဇာတ်ကားဟာ Hollywood မှာ ယနေ့အလွန်ရှားပါးသွားပြီဖြစ်တဲ့ Original ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ မည့်သည့် TV Shows ကိုမှ အခြေခံထားခြင်း မဟုတ်သလို စာအုပ်ကို အခြေခံထားတာလဲ မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင် အရင်က ရိုက်ပြီးသားဇာတ်ကားကို ပြန်လည် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားလညး မဟုတ်တဲ့ Original work တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုတည်းကိုပဲ ဖန်တရာတလဲလဲ ပြန်လည်ရိုက်ကူးနေကြတဲ့ Reboot တို့ Retold တို့Remake တို့ပြင် တစ်ခြားဇာတ်လမ်းတွေရဲ့အဆက်တွေဖြစ်တဲ့ Sequels တို့ Prequels တို့လည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ဆန္ဒအတိုင်းခေါ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ စစ်မှန်တဲ့ အနုပညာကောင်းတစ်ခု ပေါ့။
ဒီဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ပြသာနာတစ်ခုက Christopher Nolan က သူ့ရဲ့ရုပ်ရှင်တွေကို အမြဲ 70mm Film တို့35mm Film တို့နဲ့ပဲ ရိုက်ကူးတဲ့ ရှေးရိုးစွဲ လူတော်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခေတ်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့် ယခုအခါ ရုပ်ရှင်လောကတွင် Film အစစ်နဲ့မည်သူမှ မရိုက်ကုူးကြတော့ပဲ Digital ခေတ်ဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ Digital Format တွေနဲ့ပဲ ရိုက်ကူးကြပြီး Company တော်တော်များများက သူတို့ထုတ်မဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေကို Digital Format တွေအဖြစ် အကုန်ပြောင်းလဲခဲ့ကြပြီး ယခုအခါ ကမ္ဘာအနှံရှိ ရုပ်ရှင်ရုံအများစုမှာလည်း Digital Projection ကိုပြောင်းလဲခဲ့ကြသောကြောင့် ဒီကားကို ရိုက်ကူးရေးနဲ့ပြသရေးမှာ အခက်အခဲတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီ Interstellar ဇာတ်ကားဟာ Hollywood ရဲ့နောက်ဆုံး ရုပ်ရှင် Film အစစ်နဲ့ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတောင် ဖြစ်သွားနိုင်ပါပြီ။ ထို့အတွက်တွေကြောင့်လည်း ကျွန်တော် Christopher Nolan ကို လေးစားရတာပေါ့။
တစ်ကယ်တော့ ဒီဇာတ်ကားဟာ လူသားတိုင်း ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးအတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ Astrophysics ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို နားလည်သဘောပေါက်တဲ့ လူသားတွေအချို့လောက်ပဲ အကြိုက်တွေ့မိမယ်လို့ ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ Wormhole ဆိုတာ အာကသာထဲမှာ Time နဲ့Space ကို Shortcut အနေနဲ့ဖြတ်သန်းသွားတဲ့ အရာတစ်ခုဆိုတာ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ စာရွက်တစ်ရွက်ရဲ့တည်နေရာနှစ်ခုကို စာရွက်အားခေါက်ပြီး မည်သို့မည်ပုံ နီးစပ်သွားတယ်ဆိုတာကို အရိုးရှင်းဆုံး ရှင်းပြထားပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကြည့်ဖူးတဲ့ Documentations တွေမှာလဲ ထိုကဲ့သို့ပဲ ရှင်လင်းပြသထားပါတယ်။ ထို့နောက် Black Hole တွေရဲ့ဖြစ်တည်ပုံနဲ့Black Hole နားမှာ ဖြစ်တည်နေတဲ့ Planet တွေဟာ ထို Black Hole တွေဆီကနေလာတဲ့ Gravitational Pulls ဆွဲအားတွေရဲ့ပြင်းထန်မှူကြောင့် အချိန်သည် ကျွန်တော့်တို့လူသားတွေ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်ထက် အဆများစွာ ပိုမို နှေးကွေးစေတဲ့ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုပါ ရှင်လင်းပြသထားပါတယ်။ ထို့နောက် Black Hole ထဲကို ကျဆင်းသွားသောအခါ မည်သို့ မည်ပုံတွေ ကြုံတွေ ခံစားရမည်ဆိုတာကို ပါ ပြသထားသည့် အပြင် Extra Dimensional Beings အကြောင်းတွေကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေနေတဲ့ Dimension ဟာ3Dimensions ပါ။ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ အရာရာကို3Dimensions နဲ့ပဲမြင်ရပါတယ်။ ထို့နောက် Extra Dimension ဖြစ်တဲ့ Time ဆိုတဲ့ အရာကို ပေါင်းလိုက်ပြီး Time ကို Linear မဖြစ်တဲ့ Dimension အပို တစ်ခု နှင့်အတူ Gravity ဆိုသော Dimension တစ်ခုတို့ကိုပါ ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ 5th Dimension တစ်ခုရရှိလာပါတယ်။
ထိုအရာကိုလည်း ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ပြသထားခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် Gravitational Waves တွေ Dimensional Barrier တွေအကြောင်းအပြင် Black Hole အတွင်းရှိ Gravitational singularity, Ergosphere နှင့် Event Horizon တို့အကြောင်းတွေကိုပါ ပြသသွားခဲ့ပါတယ်။ (ကျွန်တော် ယခုကဲ့သို့ရှင်းလင်း ရေးပြနေရတယ်ဆိုတာ Spoilers ကိုရှောင်ရပြီး သွားကြည့်မဲ့ ပရိသတ်တွေကိုလည်း သူတို့ဘာတွေ ပြနေတယ်ဆိုတာ နားလည်အောင် စေတနာနဲ့သိသလောက် ရှင်းပြနေရတာပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း Physicist တစ်ယောက် မဟုတ်ပါ။ တက္ကသိုလ်မှာ Physics Major ယူထားတဲ့သူတွေကတော့ ကျွန်တော်ပြောနေတာတွေကို နားလည်မည်ဟု ယုံကြည်ပါတယ်။) ဒီဇာတ်ကားဟာ ထိုအရာတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး အနီးစပ်ဆုံး Scientifically အရ သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့ပါ အကြံညာဉ်တွေ ရယူပြီး ရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။ Kip Thorne ကိုယ်တိုင်လည်း Technical Adviser တစ်ယောက်အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း မျှဝေ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးခဲ့စဉ်က Christopher Nolan က အတတ်နိုင်ဆုံး ပတ်ဝန်းကျင် အစစ်နဲ့ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာ Spaceship ရဲ့အတွင်းကို အစစ်တည်ဆောက်ပြီး သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့Spaceship အတွင်းမှာ ရိုက်ကူးနေစဉ် အပြင်မှာ အစိမ်းရောင် ပိတ်ကားတွေ အသုံးပြူတဲ့အစား အာကာသထဲက ပုံရိပ်တွေကို Computer နဲ့Design လုပ်ပြီး projector နဲ့ထိုးပြီး ပြသထားပါတယ်။ ထိုအခါ သရုပ်ဆောင်တွေက Spaceship အတွင်းကနေ အပြင်ကို ကြည့်တဲ့အခါ တစ်ကယ့် အာကသထဲကို ရောက်ရှိနေတဲ့ ခံစားချက်မျိုးရရှိစေခဲ့ပြီး သရုပ်ဆောင်မှူကို ပိုမိုလွယ်ကူစေခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် သဲမုန်တိုင်းတွေကျရောက်တဲ့ အခန်းတွေမှာဆို CGI Effects တွေမဟုတ်ပဲ Cellulose-based Synthetic Dust တွေကို ထုတ်လွှတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါ။ ဇာတ်ကားထဲက ပြောင်းခင်းကြီးကိုလည်း ဒီဇာတ်ကားရိုက်ကူးရန်အတွက် စိုက်ပျိုးခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီဇာတ်ကားဟာ Christopher Nolan ရဲ့ သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ IMAX Camera နဲ့ရိုက်ကူးတဲ့ အခန်းအများဆုံးပါရှိတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ထိ IMAX Camera ကိုအသုံးပြုခဲ့သလဲဆိုရင် ပျံသန်းနေတဲ့ Learjet မှာတောင် တပ်ဆင်ခဲ့ပြီး ရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။ ဒီဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်တဲ့ Wormhole နဲ့Black Hole တွေကို CGI နဲ့ပုံဖော်ရတဲ့အခါ Dr. Kip Thorne က VFX supervisor Paul J. Franklin နဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Double Negative တို့က ပုူးပေါင်းပြီး ပုံဖော်ကြတာ တစ်ချို့Frame တစ်ခုခြင်းဆီက Rendering Process အတွက် နာရီ 100 ထိကြာမြင့်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ ထို Wormhole နဲ့Black Hole CGI program အတွက်ချည်းပဲ 800 terabytes Data အထိ အသုံးပြူခဲ့ကြရပါတယ်။
ကျွန်တော် ဒီကားနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဝေဖန်မှူကို မလုပ်ချင်ပါ။ ကျွန်တော် Christopher Nolan ရိုက်ကူးတဲ့ ရုပ်ရှင်ကို မဝေဖန် ရက်ပါ။ ထို့အပြင် ဝေလည်း မဝေဖန်ချင်ပါ။ Christopher Nolan ကို ဝေဖန်ရလောက်အောင်လည်း ကျွန်တော်က ဘယ်လောက်တော်နေလို့လဲ? ထိုထိုသော အချက်တွေကြောင့် နဲ့Christopher Nolan ကိုလေးစားမှူတွေကြောင့် တစ်ချို့သော် Plot Holes တွေနဲ့Movie Cliche တွေကို ကျွန်တော်မဖော်ပြတော့ပဲ မဝေဖန်တော့ပါ။
ထို ရုပ်ရှင်ကြည့်ခဲ့ရတဲ့ အချိန် 169 Minutes ဟာ2နာရီကျော် ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုတွေနဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကြောင့် နာရီဝက်လောက်ပဲ ထင်ခဲ့မိပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ဟာ လူသားတွေရဲ့အနာဂတ်ကို သမိုင်းသစ်ရေးမဲ့ Mission တစ်ခုအကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားပေမဲ့ ဖခင်တစ်ယောက်နဲ့သမီးတစ်ယောက်ကြားက ဖြစ်တည်နေတဲ့ သံယောဇဉ်မေတ္တာကို လွမ်းမောဖွယ် နာကျည်းဖွယ် ရက်စက်စွာ ဖော်ညွှန်းခဲ့သည်။ သူတို့သားအဖ နှစ်ယောက် ခွဲခွာခဲ့ကြရတဲ့အခန်းလေးနဲ့Jessica Chastain ရဲ့ပထမဆုံး အခန်းလေးတို့နှစ်ခန်းဟာ ပရိသတ်တွေရဲ့မျက်ဝန်းက မျက်ရည်တွေကို ကျဆင်းစေတဲ့ တွန်းအားတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ သရုပ်ဆောင်တိုင်းဟာ သူ့နေရာနဲ့သူ အဆင်ပြေဆုံးနဲ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် သရုပ်ဆောင် ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကို ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Matthew McConaughey ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အထီးကျန်နေတဲ့ လူသားတစ်ယောက် နာကျည်းဖွယ်ရာ နဲ့ကိုယ်ပိုင် အပြစ်အနာအဆာတွေကို မထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ လူသားတစ်ယောက် အပြင် မိသားစုကို ကတိတွေပေးခဲ့ပြီး မတည်နိင်ခဲ့တဲ့ ဖခင်တစ်ယောက်ဖြစ်သောကြောင့် မိမိကိုယ်ကို ဝမ်းနည်းနာကျည်းနေသော လူသားတစ်ယောက် အဖြစ် Matthew McConaughey တစ်ယောက် အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင် ပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဇာတ်ကောင်သည် အထီးကျန်နေတဲ့ လူသားလား အထီးကျန်နေတယ်လို့ခံစားနေတဲ့ လူသားလား ဆိုတာကိုတော့ မဝေခွဲ နိုင်ခဲ့ပါ။
ထို့အပြင် Matthew McConaughey ရဲ့ဇာတ်ရုပ်ဖြစ်တဲ့ Cooper ဇာတ်ကောင်တစ်ယောက် သူ့ရဲ့သားဖြစ်သူ Tom ရဲ့ကြီးပြင်းလာပုံနဲ့ဘဝကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရပုံတွေကို Videos Messages တွေကနေပြောဆိုနေတာတွေကို ကြည့်ပြီး သားကို လွမ်းတဲ့စိတ်၊ ငယ်စဉ်အခါက အနာဂတ်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့သားဖြစ်သူရဲ့ကြီးပြင်းလာတော့ ဘဝရဲ့ထိုးနှက်ချက်တွေကို မြင်ခဲ့သိခဲ့ရသော ဖခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ဝမ်းနည်းပြီး ငိုတဲ့ အခန်းလေးမှာ Oscar ထိုက်တန်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဘဝမှာ သူ့ရဲ့သားသမီးတွေသာလျှင် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဖခင်တိုင်းရဲ့တစ်ခုတည်းသော ဆန္ဒဖြစ်တယ်ဆိုတာ "When you becomeaparent, one thing becomes really clear. And that's that you want to make sure your children feel safe." ဆိုတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းတည်းနဲ့သက်သေထူပြခဲ့ပါတယ်။
တစ်ကယ်တော့ ဒီဇာတ်ကားဟာ Scientific Report တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အာကာသ ခရီးရှည်ကြီးတစ်ခုရဲ့ဖြစ်ပျက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ Report ရှည်ကြီးတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအတွက် ကျွန်တော် ကုန်ခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေ ငွေတွေ ခံစားမှူတွေ ကြေကွဲမှုတွေ မျက်ရည်တွေ အတွေးတွေ ဟာ အလွန်တန်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ယနေ့ခေတ်တွေမှာ ယခုကဲ့သို့Epic ဆန်ဆန် ဇာတ်ကားကြီးတွေဟာ ရှားပါးသွားခဲ့ပြီး ရုပ်ရှင်ဆိုတဲ့ စစ်မှန်တဲ့ အရသာကို ပေးအပ်ခဲ့နိုင်လို့ပါ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် မနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Gravity လိုမျို းရုပ်ရှင်ရုံမှာ ကြည့်နေခဲ့စဉ် ရရှိခဲ့တဲ့ ခံစားချက်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့် ရုပ်ရှင်ကြည့်ကြသလဲဆိုတာရဲ့အဖြေတွေ ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ထို့အပြင် ဒီဇာတ်ကားဟာ အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာသာမက အသိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပါ အလုပ် လုပ်စေခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ပြသချက်တွေနဲ့တင်ပြမှူတွေဟာ ဒီနှစ်ရဲ့Visually Stunning အဖြစ်ဆုံးရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ အပြင် ဇာတ်လမ်းနောက်ကွယ်က သိပ္ပံအချက်အလက်တွေဟာလည်း အမှန်ကန်ဆုံးနဲ့အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်အောင် တင်ပြပေးခဲ့လို့ ပါပဲ။ ထိုထိုသော အချက်တွေကြောင့်ပဲ Christopher Nolan ဟာ ယခု Interstellar ဇာတ်ကားနဲ့အကောင်းဆုံး Director တစ်ယောက်ဆိုတာကို ငြင်းဆန်လို့မရအောင် သက်သေ ပြခဲ့လိုက်ပါပြီ။ ထိုအချက်တွေကြောင့် ကျွန်တော့်အတွက်တော့5stars အပြည့်ပေးပြီး ဒီနှစ်ရဲ့အကြိုက်ဆုံး3ကားထဲမှာ တစ်ကားအပါအဝင် ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။
2001: Space Odyssey, Contact, Blade Runner, Inception, The Right Stuff (Christopher Nolan က ယခုရုပ်ရှင် မရိုက်ကူးခင် သရုပ်ဆောင်တွေ အကုန်လုံးကို ခေါ်ပြီး ထိုကားကို ရိုက်ကူးရမဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေကို ရင်းနှီးအောင် အတူကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။), Metropolis, Close Encounters of the Third Kind, Gravity တို့ကို အကြိုက်တွေ့ခဲ့တဲ့ သူတွေအတွက်တော့ ဒီကားကို အကြိုက်တွေ့ကြမယ်ဆိုတာ သေချာပြောရဲပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားမှာ နောက်ထပ် အကြိုက်တွေ့ခဲ့ပြီး အတွေးတွေ ပေးခဲ့တာကတော့ Murphy's Law အကြောင်းကို ပြောဆိုသွားခဲ့ခြင်းပါ။ လောကမှာ ဖြစ်မယ်လို့ကံပါတဲ့ အရာက မည်သူကပဲဖြစ်စေ မည့်သည့်အကြောင်းအရာကပဲဖြစ်စေ တားဆီးပါစေ ဖြစ်ကို ရှောင်လွှဲလို့မရပဲ ဖြစ်ကို ဖြစ်ပျက်စေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Murphy's Law အစစ်ကတော့
ဆိုပြီးပြောထားတဲ့ အတိုင်း မကောင်းတာ ဖြစ်မယ်လို့ Meant to be (or) Destiny ပါလာခဲ့ရင် ပြင်လို့မရပါ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာ ကောင်းကင် အာကာသကို အဖြေတွေပေးနိုင်မည့်အလား သမိုင်းတစ်လျှေက် စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ ထိုနေရာတွေမှာ လူသားတွေရဲ့အစရှိမည်ဆိုတဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေ.. လူသားတွေရဲ့အဆုံးရှိမည်ဆိုတဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေနဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက် အာကသာကို လူသားတွေဖြင့်လည်းကောင်း လူသားမပါဝင်ပဲ စက်တွေနဲ့ပဲ လည်းကောင်း ခရီးကြမ်းရှည်ကြီးတွေကို ထွက်ပြီး ရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်။ အဖြေတွေ ရရှိကြပြီလားဆိုတော့ တိကျတဲ့အဖြေတွေကိုတော့ မည်သူမှ မရရှိကြသေးစဲပါ။ လူသားတွေရဲ့အစကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် ဒီဇာတ်ကားကနေတစ်ဆင့် နောက်ထပ်ရရှိလိုက်တဲ့ အတွေးတွေကတော့ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာ ဒီကမ္ဘာကနေ စခဲ့ကြတာဆိုတာ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မယ်ဆိုတဲ့ အတွေးပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာ တစ်ခြားကမ္ဘာတွေကနေ လာခဲ့ကြပြီး ဒီဂြိုလ်မှာပဲ သောင်တင်နေခဲ့ကြတဲ့ မျိုးနွယ်စုတွေလား ဆိုတာတွေဟာ ရရှိလိုက်တဲ့ အတွေးဆက်တွေပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေ ဒီကမ္ဘာကြီးကနေ ထွက်ခွာဖို့ ဘာကြောင့် ကြိုးစားနေခဲ့ကြရတာလဲ? အဖြေကတော့ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေကိုယ်တိုင်ကပဲ ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာ ကမ္ဘာမြေကြီးကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုတဲ့ ဆောင်ပိုဒ်တွေကို အလေးမထား အပြူသဘောအနေနဲ့ပြောဆိုခဲ့ကြပြီး ကမ္ဘာပျက်ဆီးလာတဲ့ အခါ ထိုနေရာမှ စွန့်ခွာဖို့အတွက် တစ်ခြားဂြိူလ်တွေကို Colonize တွေလုပ်လာဖို့ကြိုးစားနေကြပါတော့တယ်။
ကျွန်တော်တို့တွေ တစ်ခြားဂြိုလ်တွေကို ရှာဖွေနေမဲ့ အစား မိခင်ကမ္ဘာမြေကြီးကို နည်းနည်းလေး စောင်းငဲ့ကြည့်လိုက်ကြပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆိုတဲ့ ဆောင်ပိုဒ်လေးကို တစ်လေးတစ်စား နားလည်အောင် ဖတ်ပြီး လိုက်နာကျင့်သုံးကြပါစို့လားဗျာ။
IMDB Rating: 9.1/10 (currently)
Rotten Tomatoes Rating: 73% (currently- ကျွန်တော်ကတော့ လုံးဝကို သဘောမတူပါ။)